Karate – “Mondiaux 2016” : hanafika any Linz i Dago | NewsMada
Karate – “Mondiaux 2016” : hanafika any Linz i Dago
Misy fahavononana. Araka ny fandaharam-potoan’ny federasion’ny karate eto Madagasikara (FKM), anisan’ny hetsika mandrafitra ny taom-pilalaovana 2016 ny fiadiana ny tompondaka eran-tany. Noho izany, efa mivonona sahady amin’ny fiatrehana io fifaninanana iraisam-pirenena io izy ireo. Marihina mantsy fa hotanterahina any Linz, Autriche, ny volana oktobra 2016, ny andiany faha-23 amin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany eo amin’ny taranja karate.
Nambaran’ny filohan’ny federasiona, Andrianavomanana Solofo Barijaona, fa anisan’ny hetsika goavana tsy azo ihodivirana ny fiadiana ny tompondaka eran-tany. Eny fa na tsy dia afaka migalabona loatra aza izy ireo eo amin’ny hoenti-manana, nambarany fa hiezaka ary hitady hevitra hatrany izy ireo ahafahany mandefa solontena amin’io andiany faha-23-n’ny hetsika io. Notsiandrian’ity filohan’ny FKM ity fa olana hatrany ny tsy fanampian’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena azy ireo ka tsy ahafahany mandray anjara amin’ireo fifaninanana iraisam-pirenena isan-tokony. « Satrinay ny handefa mpikatroka maromaro lahy sy vavy amin’ireny hetsika iraisam-pirenena ireny, saingy mitoetra mandrakariva ny olana ara-bola », hoy hatrany ny filohan’ny federasiona.
Ankoatra izay, efa miditra tsikelikely eo amin’ny tontolon’ny olympisma ny taranja karaté. Raha ny fanazavana mantsy, tafiditra amin’ny taranja fampisehoana amin’ny Lalao Olympika (JO), taona 2020, any Tokyo, Japon, ny taranja karaté.